ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ‘ဗမာမွတ်စလင်’ကွန်ဖရင့် တွင်ပြောကြားခဲ့သည့် သဘာပတိ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏မိန့်ခွန်း….. | Lumyo Chit
July 22, 2012	By lumyochit	မန္တလေးမြို့ အမျိုးသားကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးAရာဇတ်(B.A.)၏မိန့်ခွန်း (စ-ဆုံး) (ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ‘ဗမာမွတ်စလင်’ကွန်ဖရင့်(ယင်းတော်)တွင်ပြောကြားခဲ့သည့် သဘာပတိမိန့်ခွန်း)
This entry was posted in History, konwledge. Bookmark the permalink.
← Asean conference on Rohingya crisis	killing Muslims in Burma’s Rakhine State (News Report in URDU on MessageTV).flv …. →